सीमा मिचिँदा नबोल्ने, त्यही हो प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद ? भीम रावल – Bannigadhi Today
धनराज साउँद २०७७ जेठ २, शुक्रबार ०८:२७
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य भीम रावल आफ्नै पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचनामा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । उनले भारतले लिपुलेक भएर बनाएको व्यापार मार्गको विरोध गर्दै आएका छन् । पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रावलसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
त्यो गलत भयो भनेर नेपालले विरोध गरेपछि तत्काल औपचारिक र राजनीतिक रुपमा विरोध गर्यौं । त्यो विरोध गरिसकेपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो । अब अहिले भनिन्छ, ‘विगतमा किन नगरेको ? अनि नौ महिना, पाँच महिना भएका सरकारले त्यो काम गर्न छ ? त्यो पनि बुझ्न सकिँदैन ? मैंले राष्ट्रिय नीति ल्याएर काम गर्न थालेको थिएँ । तर, पाँच महिनामा सरकार ढल्यो । कहिले एक वर्षमै सरकारबाट हटिन्छ । त्यसरी काम गर्न नसकिएको हो । त्यही भएर अहिले जनताले नेकपालाई दुई तिहाईको सरकार दिएका छन् । अनि यो बेलामा पनि काम नगर्ने ? अनि आज दुई तिहाईको सरकारले हिजो उसले गरेन त्यसैले मैले नगरेको भन्न मिल्छ ? यस्तो अर्कालाई दोष थोपरेर हिड्न मिल्छ । पहिलाका सरकारहरुलाई धारे हात लगाएर त्यही बेला पनि भएको छैन । अनि हामीले चाहीं किन गर्नुपर्यो भनेर एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले भन्न मिल्दैन ।